ပဌာန်းတွဲကျမ်းတွေကို ဓမ္မဒါနအလှူအဖြစ် (၄၇)သိန်းဖိုး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံ – အနုပညာရပ်ဝန်း
ပဌာန်းတွဲကျမ်းတွေကို ဓမ္မဒါနအလှူအဖြစ် (၄၇)သိန်းဖိုး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံ
မကြာခဏဆိုသလိုအလှူအတန်းတွေပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ကိုဗစ်ကာလမှာတောင် အလှူအတန်းတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ ..။ မကြာသေးမီကမှ ကိုဗစ်အလှူအဖြစ် အောက်စီဂျင်စက်တွေ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိမှာလည်း နောက်ထပ်အလှူတစ်ခုကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။
ဓမ္မအလှူဒါန အဖြစ် ပဌာန်းတွဲကျမ်း- ၅အုပ်တွဲ အစုံ ၂၀၀ ကို ၄၇သိန်းဖိုး လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ။ စာအုပ်တွေရဲ့တန်ဖိုးမြင့်လို့ အလကားပေးလို့ ယူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တကယ်ကိုပူဇော်ချင်တဲ့ သူတွေကိုပဲရွေးပြီး ဓမ္မဒါနပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း စမိုင်းလ်က သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေကိုအ သိပေးခဲ့ပါတယ် ။
စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ အလှူရေစက်နဲ့လက်နဲ့မကွာဆိုသလို အလှူဒါနအမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်နေတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေကတော့ အရမ်းကိုလေးစားချစ်ခင်နေကြတာပါ ။ စမိုင်းလ်ကလည်း သူမရဲ့အလှူလေးနဲ့အတူ မြန်မာပြည်ကြီးကပ်ဘေးဆိုးမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါသေးတယ် ။
လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့သီချင်းနှစ်ပုဒ်နဲ့ အားလုံးရဲ့အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ တွမ်ပီး
ကိုဗစ်ကာလအလုပ်မရှိသူတွေကို အလုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးပြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း မျှဝေလာတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း
Celebrities • Lifestyle • News
Covid ကာလမှာ အခြေခံလူတန်းစားတွေကို...
အခုလိုကာလမှာ လူစုလူဝေးနဲ့ မဲဆွယ်အင်အားပြနေသူတွေကို...
World Tourism Day အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်...
မန္တလာမြေရဲ့အငွေ့သက်တွေ တဝကြီးခံစားရမယ့် G-fatt...
Copyright © 2020. Created by အနုပညာရပ်ဝန်း.